12 Mụ anụmanụ pụrụ iche ịhụ na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 12 Mụ anụmanụ pụrụ iche ịhụ na Europe
Na-acha, osisi, na ihe puru iche na njirimara na ebe obibi, ị ga-ahụ ndị a 12 anụmanụ ndị kasị pụrụ iche ụmụ anụmanụ na-ahụ na Europe. bi n'oké osimiri ndị kasị mie emi, kasị elu Alps, ma ọ bụ zuru ike na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ European woodlands, ijide n'aka na-na-na-achọgharị ndị a dị ịtụnanya anụ ọhịa na gị ọzọ escapade na Europe.
1. Mụ anụmanụ pụrụ iche ịhụ na Europe: European Lynx
Bi Switzerland, France, Italy, na Czech Republic, European Lynx bụ anụ ọhịa pụrụ iche. Lynx nwere ọdụ dị mkpirikpi, aja aja ajị anụ na tụrụ, ọ dị mfe ịchọta na oke ọhịa oyi nke snow.
Cat ga-ahụ nwamba ọhịa a ka ọ bụrụ ìgwè na-adọrọ mmasị nke pusi anụ ụlọ, na ọhịa hụrụ ntụpọ mgbada.
Ebee Ka M Ga-ahụ European Lynx Na Europe?
The Bavarian Forest bụ ihe ịtụnanya ebe hụrụ Lynxes na ụmụ ha.
2. Mụ anụmanụ pụrụ iche ịhụ na Europe: Puffin
Nwere ike ịhụ ọmarịcha ihe ndị a kachasị mma site na etiti Eprel site na ugwu ugwu. Ọmụmaatụ, Agwaetiti Skomer na Western Wales bụ ebe magburu onwe ya maka anụ ọhịa na foto Puffin. Na mgbakwunye, n'ụsọ oké osimiri Brittany bụ ebe ọzọ dị ịtụnanya iji nwee mmasị n'ụsọ mmiri Atlantic.
Puffins ruru 30 cm n'ogologo na 20 cm n'ịdị elu. Ọzọkwa, jiri oroma beak na okirikiri na anya, ị ga-achọpụta na ha dị nfe dị mfe ịhụ ọdụ ụgbọ mmiri ndị a mara mma na ọnụ ọnụ ugwu n'akụkụ oke osimiri. na 90% nke ọnụ ọgụgụ zuru ụwa ọnụ na Europe, i nwere ike na-enwe mmasị dum chịrị site n'ụsọ oké osimiri nke Europe n'ihi na ọtụtụ afọ.
Ebee Ka M Ga-ahụ Puffins Na Europe?
Osimiri Brittany na France na Skomer Island bụ nnukwu ebe ị ga-ahụ Puffin.
3. Mụ anụmanụ pụrụ iche ịhụ na Europe: Saiga
Saiga bu azu puru iche, dị mwute ikwu na, nọ n'ihe ize ndụ n'oge a. Saiga bụ otu n'ime 12 anụmanụ ndị kachasị iche ị nwere ike ịhụ na Europe. Na imi ya na-adịghị ahụkebe, anụmanụ a pụrụ iche nwere ike ime ka ọnọdụ oyi na ọkụ dị ọkụ, ebe ọ bụ na imi n'ụdị na-eje ozi na nzube a.
Ya mere, Saiga enweghị ụlọ edozi ma nwee ike ịkwaga 1000 km n'etiti oge ọkọchị na udu mmiri. Ọzọkwa, ọ nwere ike ịga ọtụtụ kilomita kwa ụbọchị ma na-arụ ọrụ karịa ụbọchị. Eziokwu na-akpali mmasị banyere Saiga bụ na mgbakwunye na ahịhịa na ahịhịa, ọ na-eri anụ nsi nye anụmanụ ndị ọzọ.
Ebee Ka M Ga-ahụ Saiga Na Europe?
Nwere ike ịhụ Saiga na ugwu ndị mara mma Carpathian na oke ọhịa.
4. Mụ anụmanụ pụrụ iche ịhụ na Europe: Osisi Marten
Ọ bụrụ na ị na-eme hiking site na European ọhịa na woodlands ị yikarịrị ka izute pụrụ iche Pine Marten. Pine Martens bi n'olulu osisi ma bụrụ ezigbo ndị ugwu, yabụ kpachara anya ile anya ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ihe okike a pụrụ iche.
Pine Martens nọ na agba aja aja, eji akwa odo odo n’onu ya. Ya mere, ọbụna na ọhịa, ọ ga-esi ike ịhapụ anụmanụ a na-adọrọ adọrọ na alaka osisi, ya na akwukwo odo.
Ebee ka m nwere ike ịhụ pine Martens?
Ugwu di elu na Scotland na Ireland, bụ ebe kachasị mma iji hụ Pine Marten.
5. Mụ anụmanụ pụrụ iche ịhụ na Europe: European Green Lizard
na 40 cm n'ogo, ọ ga-abụ ihe siri ike ịhapụ European lizard green. Ngwere a pụrụ iche nwere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ na-acha odo odo na afọ edo edo. na-akpali mmasị, n'oge oge mating, ụmụ nwoke na-agbanwe agba ha na-acha anụnụ anụnụ.
Na Green Lizard bi na elu elu nke 2000 mita, ka, mgbe ị na-arị ugwu n’elu ugwu Austrian, ijide n’aka ilegharị anya. Ọ bụrụ na ị na-eme njem site n'oge mgbụsị akwụkwọ na oyi, mgbe ahụ ị ga - ahụ ọdụm ndị a n'ọgba na ebe nzuzo. Otú ọ dị, ke ndaeyo, malite na Machị, ihe ndi a mara mma ga-ekpom oku n’anwu.
Ebee ka m ga-ahụ Green Lizard?
Nwere ike ịhụ ngwere a na-acha akwụkwọ ndụ na-anọdụ ala na anyanwụ na nkume, gafee Europe, Austria, Germany, ruo Romania na Turkey.
6. Mụ anụmanụ pụrụ iche ịhụ na Europe: Pink Flamingo
Mara mma pink flamingos bi otu n'ime kacha mma okike okike na Europe. Pink flamingos bi na ịnyịnya ọhịa dị ịtụnanya na Camargue idobere na France. Pink flamingo aghọwo ihe nnọchianya nke Camargue, ke vibrant pink agba.
N'ime ọdọ mmiri, ala ala Marshland, ma ọ bụ na-efe elu, igosi mma ha, pink flamingo bụ ihe magburu onwe ya. Ka ị na-eje ije na 4 ụzọ ụkwụ na Camargue, ị ga-aghọta ngwa ngwa ihe kpatara nnụnnụ a bụ otu n'ime 12 anụmanụ kachasị iche ịhụ na Europe.
Ebee ka m nwere ike ịhụ pink Plamingo na Camargue Reserve?
Camargue bụ nnukwu ihe nchekwa okike na France. Iji hụ nnụnụ a pụrụ iche, isi na Ogige Ornithological.
7. Whales na Ireland
Ọ bụrụ na ị ga-ụgbọ mmiri na South nke Ireland, ebe di anya, Isi knobbly nwere ike isi na mmiri pụta. Nke a nwere ike ịbụ Humpback whale, ebube na nnukwu whale bi n'oké osimiri gburugburu Ireland.
N'agbanyeghị oke na egwu ha, 12-16 mita, ha adịghị emerụ ahụ ma dị nro. Whale ndị a mara mma na-abịa na mbubreyo mgbụsị akwụkwọ, na-abụ abụ dị mgbagwoju anya ha, na-adịgide adịgide n'etiti 10-20 nkeji.
Ebee ka m nwere ike ịhụ azụ azụ azụ?
Scotland, Ireland, England dị mma maka ikiri whale.
8. Mụ anụmanụ pụrụ iche ịhụ na Europe: Anụ ọhịa wolf
Na-adọrọ mmasị ma na-atụ ụjọ, wolf bụ otu n'ime anụmanụ ndị nọ n'ihe ize ndụ na Europe. Animalsmụ anụmanụ ndị a pụrụ iche na-edozi ebe obibi ọ bụla, na agba ozuzo ha, ma buru ibu na nha. E nwere ọtụtụ anụ ọhịa wolf, mana nkịta wolf nwere ike iru 70 kg.
Anụ ọhịa wolf bi n'oké ọhịa, na mkpọ, ma were anụmanụ ndị echedoro nke ọma na Europe. Enwere ebe nchekwa na nchekwa iji chebe anụ ọhịa wolf ma nye ha ọnọdụ kachasị mma ka ha wee ghara ịla n'iyi kpamkpam.
Ebee ka m nwere ike ịhụ anụ ọhịa wolf Na Europe?
Mpaghara Liguria na Italytali, Ọhịa Bavaria, na Poland bụ anụ ọhịa wolf’ ebe obibi kachasị mma.
9. Mụ anụmanụ pụrụ iche ịhụ na Europe: Dolphins
Na-agbapụ ma na-abụ abụ na mmiri nke ụsọ oké osimiri Italytali, ọmarịcha dolphins bụ ihe ịtụnanya. Ọ bụ ezie na onye ọ bụla nwere ike ịhụ dolphins na foto, ogige mmiri, ma ọ bụ zoos na Europe, O nweghị ihe a ga-eji tụnyere ịkwọ ụgbọ mmiri na ịmasị ihe ndị ae kere eke.
Oge kachasị mma iji hụ dolphin bụ n'oge ọkọchị mgbe ọ na-ekpo ọkụ, na i nwere ike ịga na a dolphin-ekiri ụgbọ mmiri tour.
Ebee Ka M Ga-Ahụ Dolphins Na Italytali?
The ụsọ osimiri mara mma nke Cinque Terre na Ligurian oké osimiri bụ nke zuru okè n'ebe ịhụ ọhịa dolphins Na Italy.
10. Bask Sharks
Mgbe ọtụtụ ndị mmadụ nụrụ “akụm” mmeghachi omume kachasị dị egwu bụ ụjọ na ụjọ. Otú ọ dị, nnukwu Basking Shark nwere ike buru ibu ma na-eyi egwu, mana azu a na-eri plankton.
Ya mere, ị nwere ike ịnwe mmetụta zuru oke na gburugburu ndị a 12 ụda na 12 mita azụ. Bask Shark bụ shark nke abụọ kachasị ukwuu na UK, na nke kacha mma hụrụ site na nkume dị elu n'oge ọkọchị. Ya mere, ọ bụrụ na ị hụ otu nnukwu akụkụ atọ na isi awọ, mgbe ahụ ife hello na prep gị igwefoto maka a Basking Shark snap.
Ebee Ka M Ga-ahụ Basking Sharks Inn The UK?
gawa n'akụkụ mmiri Cornwell, Ala nke Mmadụ, na ọtụtụ ndị West nke England n'ikperé mmiri, ị ga - ahụ ụdị azụ sharks dị n’obodo ha.
11. Mụ anụmanụ pụrụ iche ịhụ na Europe: Wolverine
Ọgbaghara, Ọgbaghara, bụ aha wolverine na Latin, sụgharịrị gaa Gluten. Aha a na - adịghị ahụkebe dabara na onye kachasị na ezinụlọ Mustelidae – n'ụzọ zuru oke ebe ọ bụ na ha nwere nnukwu agụụ pụrụ iche.
N'ihi nke a, wolverines nwere ike ịga ogologo ije chọọ nri, ma enwere ike ịchọta ya niile na Europe.
Ebee Ka M Ga-Ahụ Wolverines?
n'ozuzu, wolverine bi na-lekwasị na Russia, ndị Taiga, na Eshia. Ọzọkwa, i nwekwara ike ịhụ wolverines na ogige anụ ọhịa dị elu na UK.
12. Mụ anụmanụ pụrụ iche ịhụ na Europe: Alpine Ibex
Elu na 4000 mita, n’etiti ugwu snoo na-ada snow, na nkume dị elu, ị ga-ahụ Alpine Ibex. Na mpi nwere ike tolite 140 cm, ewu a bụ otu n'ime ụmụ anụmanụ na-enweghị atụ na Europe.
Firstly, bi na Alps nke Europe, Ibe Alpine, adịghị mfe ịchọta ntụnyere na Basking Sharks na ngwere na-acha akwụkwọ ndụ. E wezụga, nkwo ukwu ha na-eme ka ọ dịrị Igbo Ibex mfe ịrịgo ma gbanahụ anụ na-eri anụ ya na ugwu Alps.
Ebee Ka M Ga-Ahụ Alpine Ibex?
Alps ndị Italy na Swiss Alps nwee ole na ole echiche dị ịtụnanya maka anumanu na Alpine Ibex na-ele anya.
ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere aka ịhazi njem gaa ebe kachasị mma maka ikiri anụ ọhịa. A ụgbọ okporo ígwè na njem gafee Europe bụ ezigbo njem gaa eke obibi nke ndị a pụrụ iche na ụmụ anụmanụ na Europe.
You chọrọ Embed anyị blog post “12 Kasị Unique Animals Iji Lee Na Europe” jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Funique-animals-europe%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#anụmanụ amazingwildlifeholidaysworldwide Immụ anụmanụInEurope Ugboro UloAnya UmuAhia Umu Anumanu